ABEMI 741 311 996
ABAVAKALISI 1 611 036
IZIFUNDO ZEBHAYIBHILE 847 343
Abantwana Besikolo Batyelela IHolo YoBukumkani
EFinland: Abantwana abafunda ibanga lesine baye eHolweni yoBukumkani
UInes, intwazana efunda kwibanga lesine eFinland, yeva ukuba abantwana beklasi yayo baza kufunda ngamaNgqina kaYehova kwizifundo zabo zonqulo, ngoko, yabamemela kwiHolo yoBukumkani. Abafundi notitshala bayithanda le nto.
Kwiveki elandelayo abantwana abayi-38, bekhwele iibhayisekile zabo benjenjeya ukuya kwiHolo yoBukumkani ekumgama oziikhilomitha ezintlanu. Ootitshala ababini nenqununu nabo baya. KwiHolo yoBukumkani bamkelwa ngabazalwana ababini noodade abathathu. Ngoxa besatya, aba bantwana babebuza ngeholo nangamaNgqina: “Kwenziwa ntoni apha eholweni?” “Lelantoni ela gumbi?” Babebhekisela kwithala leencwadi. “Kutheni ‘u-6 ohlulwe ngo-10’ phaya edongeni?” Ngumxholo wonyaka ke lowo, uMateyu 6:10.
Ngenxa yokuba isikolo sikwiphulo lokuphelisa ukuntlonta esikolweni, abazalwana babonisa loo klasi ividiyo yoopopayi ethi Indlela Yokoyisa Umntu Okuntlontayo Ungakhange Umbethe, kwi-jw.org. Le klasi yaboniswa nezinye izinto ezikwiWebhsayithi yaza yadlalelwa nengoma yoBukumkani. Olo tyelelo lathath’ iyure.
Inqununu, ootitshala nabantwana baluthanda olo tyelelo. Inqununu yaba nomdla kwizinto eyazibona kwiWebhsayithi kuba yayicinga ukuba zinokusetyenziswa kwizifundo zonqulo. Yavuya yakuva ukuba nezinye iiklasi zamkelekile ukutyelela iHolo yoBukumkani. Ngenxa yoku, kusuku olulandelayo utitshala wenye iklasi wathetha namaNgqina, ecela ukutyelela eholweni.
Wachola Ubuncwane Enkunkumeni
UCristina, ohlala eRomania, akawazi umnyango wesikolo, ngenxa yoko akakwazi ukufunda nokubhala. Wayelihlwempu kangangokuba wayephila ngokukhangela iitoti neebhotile zeplastiki kwindawo yokulahla inkunkuma. Ngenye imini esakhangela, wabona into enomtsalane—iincwadi ezicacisa iBhayibhile ezinemibala emihle nabantu abonwabileyo. Ezithethela wathi, ‘Bamele ukuba bakho aba bantu ndawen’ ithile.’ UCristina wayefuna ngamandla ukuyazi into ebhalwe kwezi ncwadi, ngoko wacela umntu ukuba amfundele. Akuva ukuba zazineemfundiso zonqulo, yamkhathaza into yokuba abantu belahle enkunkumeni inkcazelo engeLizwi likaThixo. UCristina waqhubeka esiya kwindawo yenkunkuma ukuze aqokelele iincwadana, amaphecana neemagazini. Ezinye zazo zazisaphelele ngoxa ezinye zazikrazulwe. Wafunda indlela yokufunda ukuze azi ngakumbi ngezinto ezibhalwe kwezi ncwadi.
Kamva, amaNgqina aqhagamshelana noCristina, kwaza kwaqaliswa isifundo seBhayibhile. Wavuya gqitha akwazi ukuba uYehova uye wamtsala ngokusebenzisa iincwadi abangakhange babe namdla wazo abanye abantu. Uyaya kwiintlanganiso yaye ziyamchulumancisa izinto azifundayo. Enye yezona zinto zimvuyisayo ngoku kukuba ufumana iimagazini, iincwadi neencwadana ezintsha. Akuseyomfuneko ngoku ukuba aye kuzikhangela enkunkumeni. Ngokwenene uCristina wachola ubuncwane enkunkumeni!
EJamani: UMargret uqhuba isifundo ehlathini
EJamani, ntsasa nganye uMargret uhamba nenja yakhe ehlathini. Uthi: “Ndiye ndizame ukuthetha nabantu abagqithayo. Ukuba abangxamanga, incoko ndiyisa eBhayibhileni.”
Ngenye imini wadibana nogogo ohamba nenja yakhe oneminyaka ephaya kwengamashumi asixhenxe. UMargret wancokola naye. Elo bhinqa layithanda loo ncoko laza laxelela uMargret ukuba liyathandaza kuThixo yaye liyifunda yonk’ imihla iBhayibhile. Ukususela ngoko, bamane bedibana baze bathethe ngezinto eziseBhayibhileni. Ngenye imini eli bhinqa labuza uMargret ukuba: “Kutheni uyazi kangaka iBhayibhile?” UMargret wathi uliNgqina likaYehova.
Izihlandlo ngezihlandlo uMargret wayesoloko ecela ukuliqhubela isifundo, kodwa lingavumi. Sekunjalo, akazange ayeke ukulishumayeza. Kwiinyanga ezimbalwa kamva, uMargret waphinda wacela ukuliqhubela isifundo. Ngoku eli bhinqa lade lamxelela ukuba liyoyika ukuqhutyelwa isifundo seBhayibhile kuba indoda ehlala nalo ayifuni nokuwabona amaNgqina kaYehova.
Ngoko uMargret waqonda ukuba xa esiya ehlathini makahambe neBhayibhile kunye nencwadi ethi Okufundiswa YiBhayibhile. Xa waphinda wadibana nelo bhinqa, ngenkalipho uMargret wathi: “Ngoku andiceli kukuqhubela isifundo seBhayibhile ekhaya, kodwa ndicela isifundo ‘sasehlathini.’” Lithe gwantyi iinyembezi, elo bhinqa lavuma ngokukhawuleza. Esi sifundo “sasehlathini” siqhutywa kathandathu ngeveki. Kuxhomekeka kwixesha lonyaka nemozulu, maxa wambi uMargret ebeye asiqhube phantsi kweambrela ekhanyise ngetotshi.
Ukunikina Intloko Okubhidayo
Udade ogama linguDelphine wayefundela uIrina waseBulgaria. UIrina wakuthanda oko wayekufunda waza waya rhoqo kwiintlanganiso. Kodwa umyeni kaIrina wayengafuni kwanto edibanisa umkakhe namaNgqina. Lo mfo wafuduka nentsapho yakhe baya kwenye yeelali ezincinane zaseSweden, nto leyo eyabangela uIrina akaphinda wadibana noDelphine. Noko ke, oovulindlela ababini, uAlexandra noRebecca, badibana noIrina, owayengasazi isiSwedish. Aba dade bamshumayeza ngesiBulgaria besebenzisa incwadana ethi Good News for People of All Nations. Emva koko, bekwasebenzisa le ncwadana, bambuza enoba akangethandi ukuba afumane iincwadi ngolwimi lwakhe. UIrina wayinikina ngamandla intloko yakhe. Oodade bamshiya becinga ukuba akanamdla.
UAlexandra wakhumbula ukuba uLinda, udade waseSweden okhonza eBulgaria, wayeza kufika kwiiveki ezimbalwa. Ngoko, wacinga ukuba kungangcono uIrina ayive inyaniso ngolwimi lwakhe. Xa uLinda wafikayo, yena noAlexandra baya kuIrina. UIrina wachazela uLinda ukuba ebethandaza qho ebusuku ecela uYehova amncede aqhubeke nesifundo sakhe. Wayesoloko ehamba nencwadi yakhe yesiBulgaria ethi Okufundiswa YiBhayibhile. Wayefuna ukuyibonisa amaNgqina awayenokudibana nawo esitratweni, kodwa zange abone nelinye. Kodwa ngoku wayechulumanca nyhani njengokuba wayefumana iincwadi ngesiBulgaria!
ULinda wabuza uAlexandra ukuba xa babedibana naye okokuqala kwakutheni ukuze bacinge ukuba uIrina akanamdla. UAlexandra wathi wanikina intloko. Encumile, uLinda wathi kaloku abantu baseBulgaria bayanqwala xa bengavumelani nawe baze banikine intloko xa bevuma. Ade abe uyasazi isiSwedish, uIrina usaqhubeka nesifundo sakhe seBhayibhile ngesiBulgaria. Yenzeka njani loo nto? Ufunda noDelphine besebenzisa izixhobo zale mihla ezikwenza umbone umntu othetha naye.
UJemima, ohlala eSpeyin, wayifundiswa esengumntwana inyaniso. Noko ke, xa wayeneminyaka esixhenxe ubomi bakhe batshintsha. Unina wagqiba kwelokuba akasafuni ukuba liNgqina likaYehova waza waqhawula umtshato. Xa wayeneminyaka elishumi elinesithathu, uJemima wayeka ukuhlanganisana namaNgqina waza wala ukufundiswa inyaniso nguyise.
Njengoko ekhula, uJemima wangena kwimibutho yasekuhlaleni neyeepolitiki, efuna abahlali benzelwe “ubulungisa.” Xa ethubeni wazibhaqa ephelelwe ngumsebenzi, uyise uDomingo wamnika umsebenzi wokupeyinta.
Ngenye imini xa babesebenza kunye, uyise wacela ukumqhubela isifundo. uJemima wala, kodwa wathi uza kutsho xa enomdla. Xa epeyinta, uDomingo ebedla ngokuphulaphula iincwadi ezirekhodiweyo njengeBhayibhile neemagazini, kodwa yona intombi yakhe yayikhetha ukumamela umculo wehlabathi.
NgoNovemba 2012, uDomingo, nowayephinde watshata, wamenyelwa kwiSikolo SeBhayibhile Sezibini EzingamaKristu. UJemima yammangalisa into yokuba uyise eza kushiya yonke into aye kwisikolo seBhayibhile iinyanga ezimbini aze athunyelwe naphi na. Wayeqala ngqa uJemima ukuqonda indlela engene nzulu ngayo inyaniso kwintliziyo kayise, yaye wayefuna ukwazi isizathu.
UJemima wayeka ukuphulaphula umculo wakhe waza waphulaphula izinto eziphulaphulwa nguyise. Waqalisa ukuba nemibuzo. Ngenye imini uDomingo ekhwele elelini epeyinta, uJemima wathi: “Usakhumbula ndisithi ndiza kukuxelela xa ndifuna ukufunda iBhayibhile? Ngoku lifikile elo xesha.”
Yamchwayitisa ke le uDomingo. NgoJanuwari 2013, baqalisa ukufunda kunye kabini ngeveki. Isikolo saqalisa ngoAprili, baza baqhubeka nesifundo sabo ngokusebenzisa izixhobo zale mihla ezikwenza umbone umntu othetha naye. UJemima weza kumsitho wabaphumeleleyo, walonwabela ucwangciso. NgoDisemba 14, 2013, uJemima wabhaptizwa.
UJemima uthi: “UYehova uye wanomonde nyhani kum, yaye zange andincame. Uye wandinika into endingazange ndayifumana ehlabathini—abahlobo bokwenene. Umanyano lwabazalwana lundenza ndimthande nangakumbi uYehova.”
NgoMatshi 30, 2014, uVasilii, osele eneminyaka ekhonza kwiBheteli yaseRashiya wayeshumayela kufutshane neofisi yesebe xa kwathi gqi imoto yamapolisa. Ipolisa laphuma emotweni laza lamxelela ukuba ayiyeke le nto ayenzayo, ngenxa yokuba abamelwane bakhe bayakhalaza. Elinye ipolisa laliyirekhoda loo ncoko. UVasilii wagqiba ekubeni athobele, angabi enyus’ ehlisana nawo ngamalungelo akhe. Ngelo xesha kwakukho abantu ababukeleyo. UVasilii wemka, waza emva kweentsuku ezimbini wacela ukudibana nomphathi wamapolisa. Savunywa isicelo sakhe. Ebudeni baloo ntlanganiso, uVasilii wambulela lo mphathi ngomsebenzi omhle abawenzela abahlali nangokuba nobubele kuye kwiintsuku ezimbini ezidluleyo. Umphathi wajika wajonga isekela lakhe waza wathi, “Kuyo yonke le minyaka iyi-32 ndilipolisa, zange ndeva sinconywa ngomsebenzi wethu!” Encokweni, umphathi wenziwa waqonda ukuba umsebenzi wethu wokushumayela esitratweni usemthethweni. Umphathi wabuza uVasilii ukuba kutheni engazange axambulisane namapolisa xa esithi makayeke ukushumayela, ekubeni wayesazi ukuba wenza into esemthethweni? UVasilii waphendula wathi, “Ndiyawahlonipha amapolisa. Cinga nje ukuba bebeza kuthini abantu ababukeleyo xa ndixelela amapolisa ukuba abawazi umsebenzi wabo.” Umphathi nesekela lakhe bawathanda la mazwi, baza bamqinisekisa ukuba abasoze baphinde bamhluphe.